AKHRISO Q-2aad: Warbixin Qiimo Badan Oo BBC Sports Ka Diyaarisay Ciyaaraha Somaliland - Gool24.Net
AKHRISO Q-2aad: Warbixin Qiimo Badan Oo BBC Sports Ka Diyaarisay Ciyaaraha Somaliland
Khamiistii waxa aanu idiin soo gudbinay qaybta hore ee warbixin ay warbaahinta BBC Sports ka diyaarisay heerka ciyaaraha ay ka marayso Somaliland, kulliyado ciyaareed oo dhallinyaro qurbo joog ah ka sameeyeen iyo sida loo samayn karo xul qaran oo aan ahayn mid sahlan.
Qaybtan ayaa waxay BBC Sports kusoo qaadday arrimo badan oo la xidhiidha sida ciyaartooyo xul qaran ah oo dunida ka ciyaaraa qayb uga qaadanayaan ictiraafka ay raadinayso Somaliland, sida ay dalka u joogaan da’yar badan oo hibo ciyaareed leh balse u baahan in la geliyo waqti iyo tababarid gaadhsiisa heerka ay ku hamiyayaan.
Qormadan maanta, waxa aanu idiinku soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinta oo u dhignayd sidan:
‘Rajo ayay gelinayaan’
Kulliyaddu caawimo yar ayay heshay ka heshay kooxda kubadda cagta West Brom, waana qalab tababar iyo adeegga caafimaadka deg0degga ah, laakiin da’yarta Somaliland waxay weyn bay u tahay inay xidhaan, sannadkii horena waxay ku lebbisteen shaadhasha Port Vale iyo Walsall.
“Wiilashu waxay imanayaan garoonka ka hor tababarka, waxaanay xaaqayaan si ay u bubiyaan in aanay leban/ jaajuur ama dhagaxaan. Laba siyaabood ayay noo caawisay, midda hore in aanaan lacag ku bixin halka lagu ciyaarayo iyo in da’yartu daryeel yar ka helaan dadka deegaanka” Sidaas waxa yidhi Ali.
Sannad gudihi, kulliyaddu waxay tartamo u qabatay wiilashada da’doodu u dhaxayso 13 jirrada, 15 jirka iyo 17 jirrada. Waxa kale oo ay doonaynaa inay horumariso dumarka, dhawaanna waxay qabatay tartanka haweenka oo uu madaxweyne ku-xigeenka (Somaliland) u hambalyeeyey kooxdii guuleysatay.
Kulliyaddu waxay si dhow ula shaqaysaa Lions Gate oo ah xarun ciyaareed oo uu sameeyey Mohamed Yusuf oo ka tegay Britain, lagana sameeyey meelaha ugu fiqiirsan ee Hargeysa.
Shaqo la’aantu way sarraysaa, waxaanay dhallinyaro badan oo reer Somaliland ah naftooda ku biimeeyaan safarka halista ah ee tahriibta Libya illaa Yurub. Daraasad ay UNICEF maalgelisay ayaa lagu ogaaday in tahriibeyaashu ay u badan yihiin wiilasha yaryar oo ay qaarkood 14 jirro yihiin oo safarkooda ay kala kulmaan tacaddiyo iyo dhimasho.
“Waxa noo yimid haween barooranaya oo noo mahadcelinaya, sababtoo ah, wiilashooda ayaanu ka joojinay tahriib ay isku dayayeen. Waxa aanu siinay rajo iyo wax u muuqda horu-socod, manaanaan garanaynin inaanu sidaas samaynayno.” Ayuu mar kale yidhi Ali.
“Meelaha qaarkood (UK), tababariddu waa in ciyaartooyada la horumariyo si ay uga ciyaaraan Premier League, laakiin anaga, waa inaanu rajo siino oo aanu sii wadno oo aanaan is dhiibin.” Ayuu ku daray.
Aqoonsiga Fifa wuxuu u muuqdaa mid aan la filayn, laakiin ma noqonayo mid aan loo baahnayn. Ururku (FIFA) wuxuu leeyahay 211 xubnood, 18 waddan ayaanu dheer yahay dalalka ku jira Qaramada Midoobay. Sannadkii 2016, Gibraltar iyo Kosovo ayaa xubnihii ugu dambeeyey ka noqday, waxaanay labaduba gaadheen guulo xattaa iyadoo uu ka maqan yahay aqoonsigii siyaasadeed.
Taas beddelkeeda, kulliyadda ayaa diiradda saaraysa qorista iyo tababaridda ciyaartooyo iyo tababareyaal badan, ujeedaduna waa in la dhiso kooxo dhallinyaro ah oo wanaagsan oo ay da’doodu ka hoosayso 15 jiro iyo 17 jirro.
Si aad u akhrido warbixinta oo dhan guji 2